MYSTERY ZILLION Blog – Page9– education for everyone
Posted on October 29, 2009 July 3, 2010
Windows Registry အပိုင်း (၅)
(ဒါကတော့ ညီလေး ကိုစိုင်း ရဲ့ တင်ပြမှုတစ်ခုပါ)
1/ @echo off
2/ color 0a
6/ set/p val = Do you want to hide Run Dialogbox (y/n)?
7/ if/I”%val%”==”y” goto -Hide
8/ if/I”%val%”==”y” goto -Quit
9/ goto :-main
Continue reading “Windows Registry အပိုင်း (၅)”
Windows Registry အပိုင်း (၄)
Windows Registry ကို Script များရေးပြီး ပြုပြင်ခြင်း
ဒီအခန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ Windows Registry ကို Script ရေးပြီးပြုပြင်ကြရအောင်…..
ရေးမယ်ဆိုပြီး အရမ်းလည်း လန့်မသွားပါနဲ့၊ နားလည်ပြီးသာ လူတွေကလည်း
အရမ်းလွယ်တယ်လို့ မထင်မိပါနဲ့။ သဘောတရားနားလည်ရင် လွယ်ပါတယ်။
ရဲ့ Operation System မှာ ပါ၀င်တဲ့ Command Propt (cmd) ကို သုံးပြီး
ပြုပြင် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Script ရေးဖို့တော့ ထုံးစံအတိုင်း Note Pad
Continue reading “Windows Registry အပိုင်း (၄)”
Windows Registry အပိုင်း (၃)
Desktop ပေါ်ရှိ Function များကိုပြုပြင်မယ်
Items [ Value Name ] [ Data Type ] [ Value ] [ Path ]
NoR-Click [ NoViewContextMenu ] [ DWORD ] [ 0\_1 ] [ 1-2>P\_E ]
(Desktop ပေါ်မှာ R-Click နှိပ်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာ)
TooTip [ ShowInfoTip ] [ DWORD ] [ 1 ] [ 1>P\_Advanced ]
(ကျွန်တော်တို့ ဖိုင်တစ်ခုကိုထောက်လိုက်ရင် အမျိုးအစား၊ ရက်စွဲနဲ့ ဆိုဒ်
တွေကို ပြသတဲ့ခပ်မှိန်မှိန် ဘောက်ကလေးကို ဖျောက်ချင်ရင်) (သူက Default 1
ဗျ၊ လမ်းဆုံးမှာလည်း နည်းနည်းကွာမယ်)
Continue reading “Windows Registry အပိုင်း (၃)”
Windows Registry အပိုင်း (၂)
Chapter (2) ပထမပိုင်း
Windows Registry ကို Manual ပြုပြင်ခြင်း
ဒီအခန်းကို မစတင်မှီမှာ ပထမဦးစွာ ပြုလုုပ်ထားသင့်တာကတော့ Registry Backup လုပ်တာပါပဲ။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Registry ကို Backup လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားလိုက်ပါ။
နောက်တစ်ခုက အတိုကောက်(short-cuts) တွေကို နားလည်အောင် မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။
SUB KEY SHORT-CUTS
HKEY_CURRENT_USER [- HKCU]
HKEY_CLASSES_ROOT [- HKCR]
HKEY_CURRENT_CONFIG [- HKCC]
HKEY_USERS [- HKU]
HKEY_LOCAL_MACHINE [ – HKLM]
(Registry ကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ HKCU နဲ့ပြင်ရင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော User တစ်ယောက်သာလျှင် အကျိုးသက်ရောက်ပြီး HKLM နဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းက User အားလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။)
Continue reading “Windows Registry အပိုင်း (၂)”
Windows Registry အပိုင်း (၁)
Windows Registry အကြောင်းကို အပိုင်း သုံးပိုင်းခွဲပြီး ရှင်းပြပါမယ်။
Chapter(1) – Windows Registry အကြောင်း၊
Chapter(2) – Windows Registry ကို Manual ပြုပြင်ခြင်း၊
Chapter(3) – Windows Registry ကို Script များရေးပြီး ပြုပြင်ခြင်း၊
Windows Registry အကြောင်း
ရဲ့ Setting တွေအတော်များများကို ကျွန်တော်တို့ဟာ Control Pannel ကနေတဆင့်
ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ User များအတွက် လွယ်ကူနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Windows ဟာ သူ့အတွက် ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုမျိုးကို Control Pannel ကနေပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပါဘူး။ မှားယွင်းပြင်ဆင်မိမှာ စိုးတဲ့ အတွက် Windows O.S အတွက် အရေးပါတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကို Registry ကနေသာ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Windows O.S ရဲ့ Registry
ဆိုတာ O.S နဲ့ စက်ရဲ့ Application, Hardware, Software, Device Driver
& Network Portocol တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် အစုအဝေးပါ။
Continue reading “Windows Registry အပိုင်း (၁)”
Posted on October 26, 2009 July 3, 2010
Japanese Basic 3(အခြေခံဝါကျ)
အသံထွက်လည်းပေါင်းတတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆက်ရအောင်။ အရေးကြီးတာက ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာနှစ်ခုက romajiတွေကို နားမလည်ရင် ဘယ်လိုမှရှေ့ဆက်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။ ခုကနေစပြီး romajiနဲ့ပဲ ရေးပြီး မြန်မာလိုအသံထွက် ရေးပြမှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
အခု နောက်ထပ်မှတ်စရာနှစ်ချက်ကို ပြောပြပါမယ်။ ဒီနှစ်ခုပြီးရင် ဂျပန်လိုပြောဖို့ အုတ်မြစ်ချပြီးပြီသာ မှတ်လိုက်တော့..။ ပထမတစ်ချက်က သံရှည်ဆွဲတာပါ။
Continue reading “Japanese Basic 3(အခြေခံဝါကျ)”
Posted on October 24, 2009 July 3, 2010
PHP ဆိုတာ Hypertext Preprocessor ဖြစ်ပါသည်။ PHP သည် server-side scripting language တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး open source software လည်းဖြစ်သည်။PHP ကို Linux, Windows အစရှိတဲ့ OS တွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။PHP support လုပ်တဲ့ database တွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ် ဒီထဲကမှ တချို့ ကိုပြောပြရရင် (MySQL,Oracle,PostgreSQL,Sybase) စသဖြင့်ပေါ့ ။
PHP သည် server-side ဖြစ်လို့သူအလုပ်လုပ်တာကိုမမြင်ရပါဘူး။သူ့လုပ်ဆောင်ချက်က Client ဘက်(Browser) နဲ့ database တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့။
ရေတွင်း၊ရေလှည်းနဲ့ ရေခပ်တဲ့ကြိုး နဲ့ ပုံး ပေါ့။ ရေလှည်းထဲကို ရေဖြည့်မယ်ဆို ရေတွင်းထဲက ရေကိုကြိုးနဲ့ပုံးမပါဘဲ ခပ်လို့မရပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ရေတွင်းဆိုတာက database ၊ရေလှည်းဆိုတာက Browser ၊ ပုံးနဲ့ကြိုးဆိုတာ PHP ပေါ့။ Continue reading “PHP Basic”
Posted on October 22, 2009 July 3, 2010
Japanese Basic 2(အသံပေါင်းခြင်း)
ပထမသင်ခန်းစာတစ်က ဂျပန်အက္ခရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမရှင်းရင် အချိန်မရွေးလှမ်းမေးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအက္ခရာတွေကို အလွတ်ရပြီဆိုရင် အသံပေါင်းထွက်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြပါမယ်။
ပထမဇယားထဲကအောက်ဆုံးသုံးလုံးဖြစ်တဲ့ “ya, yu, yo”ကို “i”အသံနဲ့စာလုံးတွေနဲ့ပေါင်းတာပါ။ အဲလိုပေါင်းရင် စာရေးတဲ့အခါရှေ့တစ်လုံးပဲ ရေးပြီးတော့ အသံထွက်ကလည်း ပေါင်းတဲ့စာလုံးကို လိုက်ပြီး ပြောင်းသွားပါတယ်။ မရှုပ်ပါဘူး။
ဥပမာ…. Continue reading “Japanese Basic 2(အသံပေါင်းခြင်း)”
Posted on October 20, 2009 July 3, 2010
International English Language Testing System(IELTS)ဖြေတဲ့ ကျောင်းသားဦးရေက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုများလာတာ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီတော့ သိသလောက်လေး အကြံပေးချင်လို့ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးပါတယ်။
IELTSမှာ အောင်တာ ရှုံးတာ မရှိပါဘူး။ band 0ကနေ9အထိပေးပါတယ်။ မဖြေတဲ့သူဆို သုည၊ အင်္ဂလိပ်ကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောတဲ့သူအဆင့်ရှိရင် ကိုးရပါတယ်။ ပုံမှန်တော့ တက္ကသိုလ်တွေက အနည်းဆုံး 5.5ကနေစတောင်းတတ်ပါတယ်။ ဥပဒေတို့၊ ဆေးတို့တက်ချင်ရင် 8လောက်ထိ တောင်းတဲ့ ကျောင်းတွေရှိပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းသားတွေက 6နဲ့6.5လောက်ရတာများပါတယ်။ 7.5/8ထိရတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
IELTSက လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်များများယူလေ အမှတ်များများရနိုင်လေပါပဲ။ တစ်ပွဲတိုးလုပ်တာ မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံသိပ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လလောက် မေးခွန်းဟောင်းတွေကျင့်ပြီးရင် ဖြေလို့ရပါပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ မေးခွန်းဟောင်းစာအုပ်တွေ လွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ တစ်အုပ်ကို ၁၅၀၀လောက်ပဲ ပေးရပါတယ်။ Cambridge IELTS 4/5/6… အဲဒီဟာတွေသာကျင့်ထားရင် 6လောက်ကတော့ ပြေးမလွတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ ရှေ့ပိုင်းကျတဲ့စာအုပ်တွေက မကြည့်တော့တာဘဲ ကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ မေးခွန်းပုံစံနည်းနည်းစီ ကွဲသွားလို့ပါ။ Continue reading “IELTS ဖြေတော့မလား”
ခက်သလားဟေ့ Data Base – အပိုင်း ၁
လုံးဝ မသိသူများအတွက် Data Base မိတ်ဆက်
၁။ ။ မိတ်ဆက်
၂။ ။ ဇယား၊ အတိုင် နှင့် အတန်းများ
၃။ ။ တန်ဖိုးနှစ်ခု မထပ်သော အတိုင်
၄။ ။ အမှတ်စဉ် အလိုအလျောက်တိုးပွားခြင်း
၅။ ။ တန်ဖိုးများ စီခြင်း
၆။ ။ ရှာဖွေခြင်း (သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခြင်း) နှင့် မာတိကာ အသုံးဝင်ပုံ
၇။ ။ တန်ဖိုးများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း
၈။ ။ တန်ဖိုးများ ဖျက်ခြင်း
၉။ ။ ဤမှဆက်၍
Continue reading “ခက်သလားဟေ့ Data Base – အပိုင်း ၁”
Posted on October 18, 2009 July 3, 2010
Japanese Basic 1(ဂျပန်ကကြီးခခွေး)
ဂျပန်စာဆိုတာ အများသိတဲ့အတိုင်း တရုတ်စာကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ စာပေတွေကို ဆက်ခံရာကနေ တရုတ်စာလုံးတွေကို ဂျပန်စာလုံးအဖြစ် တီထွင်ပြောင်းလဲခဲ့တာပါ။ တရုတ်စာလုံးတွေကို ဆက်သုံးနေတာလည်း ရှိပါတယ်။ စာလုံးပုံစံတူပေမယ့် အသံထွက်ကွဲသွားပါတယ်။
Continue reading “Japanese Basic 1(ဂျပန်ကကြီးခခွေး)”
Basic Joomla Install and Google App
Joomla ကို ဘယ်လို install လုပ်ရမယ်။ နောက်ပြီးတော့ free domain ဘယ်လိုယူရမလဲ။ Google App နဲ့ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေကို ဖောှပြထားပါတယ်။ စာအုပ်လေးကတော့ နည်းနည်းတော့ ဟောင်းနေပေမယ့် စတင်လေ့လာတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ အသုံးဝင်နေဆဲပါပဲ။ ဒါကြောင့် စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ နောက်ထပ် စာအုပ် အသစ်ထွက်လာအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ စာအုပ်လေးကတော့ အောက်က Link ထဲမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Link လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် click here to download attachment မှာ here လေးကို နှိပ်ပြီး download ချပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်။
Continue reading “Basic Joomla Install and Google App”
Posted on October 17, 2009 July 3, 2010
နည်းပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အခြေခံအကျဆုံး အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ နားလည်အလွယ်ဆုံး Webpage ရေးနည်းကိုပြပါဆိုရင် HTML ပဲရှိပါတယ်… ဒါကိုနားမလည်ရင်.. ဘာမှ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး Pro မဖြစ်နိုင်ပါဘူး… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြားနာမှတ်သားဖူးသမျှ ဝေမျှပါတယ်.. နားလည်ပြီးသူများအတွက် မရည်ရွယ်ပါ.. စတင်လေ့လာလိုသူများအတွက်သာ အထူးဦးတည် ရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော် သိလွန်းလို့မဟုတ်ပါ.. အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလို “ဧဝံမေ သုတံ ” ပါလို့ ထပ်ပြီး ၀န်ခံပါရစေ… Continue reading “HTML By Ccrazy”
C++ program မရေးမီ သူ့ကို ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာကို အရင်ကြည့်ရအောင်။
[Source code] —- compile—>[Object code] —-link—->[Executable Code]
(eg mypr.cpp) —-compile—->(eg mypr.obj) —-link—–> (eg mypr.exe)
Source code ဆိုတာ user ရေးထားတဲ့ C++ program (.cpp)ကို ပြောတာပါ။ အဲဒီ program ကို computer နားလည်တဲ့ format ဖြစ်အောင် translate လုပ်ပေးရတယ်။ compiler သည် translator program တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ C++ source code ကို compile လုပ်လိုက်ရင် machine readable ဖြစ်တဲ့ object code (.obj) ကို generate လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ object code ကို link လုပ်ပြီးမှသာ executable code (.exe) ထွက်လာတာပါ။ အဲဒီအခါမှ program ရဲ့ output ကို မြင်ရပါတယ်။
C++ Program ကို ရေး ရန်အတွက် Turbo C software အရင် Download လုပ်ရပါမယ်။ Continue reading “C++”
Posted on October 12, 2009 July 3, 2010
Chapter2: Selector
Jquery မှာ CSS မှာ အသုံးပြုတဲ့ selector တွေကို အသုံးပြုထားပြီး CSS လို့ Doucment Object Model (DOM) တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထိထိရောက် ခေါှယူနိုင်အောင်ပေါ့။ ဒီ Chapter မှာတော့ Selector တွေအကြောင်းပြောပြပြီး Jquery ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် selector အနည်းငယ်ကိုလည်း ပြောပြသွားမှာပါ။
Jquery မှာ အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ အပိုင်းတစ်ခုပါ။ DOM ထဲမှာ ရှိတဲ့ elements တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ selecting လုပ်လို့ရတယ်။ Document Object Model ဟာ အစီအစဉ်တကျ ရှိတဲ့ family-tree structure ပါ။ HTML ဟာ အခြား markup language တွေလိုပဲ DOM ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျွန်တောှတို့ဟာ same terminology ကို အသုံးပြုပြီး family relastionship တွေကို ခေါှယူနိုင်ပါတယ်။ parents, childern , … စတာတွေမျိုးပေါ့။ HTML မှာ ရှိတဲ့ family tree code လေးကို ဥပမာအနေနဲ့ ကြည့်ရအောင်။
Continue reading “Learning Jquery 1.3”